Faa'iidooyinka caafimaad ee dubista Badda-Badda-Badda-NANTONG CHITSURU FOODS CO., LTD.
Faa'iidooyinka Caafimaadka ee Kalluunka la dubay
Waqtiga: 2018-10-25 Hits: 273
Nori seaweed waxaa dhab ahaan lagu tilmaamay inay yihiin khudradda, khudradda badda taas oo ah. Qaarkeen baa laga yaabaa inaanay waligood dhadhamin xashiish badeed kahor laakiin Jabbaanku waxay cunaayeen cunnadan super-ka qarniyaal badan hadda. Waxay u qaddariyaan nori inay yihiin cunto cimri dherer ah.
Iyada oo aad u muuqata muuqaal nafaqo leh, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka cunitaanka caleenta duban:
1. Ay ku badan tahay iodine
Badda la dubay (ama nooc kasta oo badda ka mid ah)) waa ilo hodan ah oo iodine ah. Iodine waa macdan muhiim u ah dheef-shiid kiimikaadkaaga waxayna ka caawisaa qanjirkaaga qanjirka 'thyroid' inuu u shaqeeyo sida ay tahay inuu noqdo. Hal xaashi oo nori ah ayaa ka kooban qiyaastii kala bar qaadashada maalinlaha ah ee iodine lagu daro.
2. Isha laga helo fitamiin B12
Faytamiin B12 wuxuu taageeraa shaqada caadiga ah ee maskaxda iyo nidaamka dareenka wuxuuna caawiyaa sameynta unugyada dhiigga cas. Nori waxay ka koobantahay 1.2 mg fitamiin B12 halkii xaashi.
3. Astaamaha ku badan
Potassium waa macdan ka caawisa hoos u dhigida cadaadiska dhiiggaaga isla markaana hoos u dhigta halista istaroogga iyo cudurka wadnaha. Nori waxay ka kooban tahay 50 mg oo kaalshiyam ah halkii xaashi.
4. Waxaa ku jira borotiin iyo fiber
In kasta oo qaddarradu aysan aad u sarreeyn, kalluunka la dubay ayaa runtii ku jira borotiin iyo faybar.
5. Kaloriinta oo ku yar iyo dufanka buuxa
Cawska la dubay ayaa si aan caadi aheyn ugu hooseeya kalooriyada oo leh hal xaashi oo ay kujirto kaliya 5 kalori. Qaddarka dufanka ee nori ku dhow waa la dayacin karaa.
Waxaa xusid mudan in Chips-ka la dubay ay sidoo kale yihiin il aad ufiican oo laga helo kalsiyum, magnesium, fosfooraska iyo fitamiin C.
Nantong Chitsuru Foods Co., Ltd oo u heellan cawska la dubay in ka badan 20 sano, waxaan nahay xulashadaada ugu fiican!
Xiga: Waa tan sida loo ogaado haddii sushiku runti yahay mid cusub